လူကြိုက်များလာတဲ့ Maxthon Cloud Browser 4.4.5. Download Latest Version - Software Guide
Home / Browser / လူကြိုက်များလာတဲ့ Maxthon Cloud Browser 4.4.5. Download Latest Version
လူကြိုက်များလာတဲ့ Maxthon Cloud Browser 4.4.5. Download Latest Version Reviewed by Ko Lin on 4:23:00 AM Rating: 5
လူကြိုက်များလာတဲ့ Maxthon Cloud Browser 4.4.5. Download Latest Version
Ko Lin 4:23:00 AM Browser
Website နဲ့ Bloggerတော်တော်များများရဲ့site တွေမှာgoogle ကနေ ထည့်သွင်းထားတဲ့ကြော်ငြာတွေကို ဖယ်ရှားချင်တော့ Maxthon Cloud Browse ကိုပဲ အသုံးပြုရလေအောင် လို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ကြော်ငြာတွေကို မမြင်ချင်ရုံတင်မကပဲ အသုံးပြုရတာလည်း တော်တော်လေး သွက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ သုံးဖူးတဲ့ သူတွေကတော့ သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ Website နဲ့ Blogger ရေးနေကြတဲ့ နည်းပညာရှင်တွေအတွက်လည်း တစ်ကယ်တစ်ကယ် အသုံးဝင်လိမ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။မိမိ ACCOUNT အဟက် မခံရအောင် ကာကွယ်တာမို့ အသုံးပြုစေချင်တဲ့ ဆန္ဒနဲ့ ပါ။
Website နဲ့ Blog တွေမှာ တွေ့မြင်ရတဲ့ google ရဲ့ ကြော်ငြာတွေကို မမြင်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ Maxthon Cloud Browser ကိုအသုံးပြုရင် အဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ကျန်တာတွေကိုတော့ ကိုယ်တိုင် အသုံးပြုမှ သိတာမို့ ကိုယ်တိုင် သုံးကြည့်ပေတော့ဗျာ။
Windows XP/Vista/7/8/9/10 အားလုံးမှာ Install ပြုလုပ်ပြီး လွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
( Browser မှာ မြန်မာလိုပေါ်အောင် ပြုပြင်နည်းလေးကိုလည်း ထပ်မံဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်)
Browser ကိုဖွင့်ပြီး Browser ရဲ့ ဒေါင့်လေးမှာကလစ်ပြီး setting ထဲဝင်ပါ။ Advanced ရှာပြီး နှိပ်ပါ
Webpage display ရဲ့ အောက်မှာ Webpage font တွေလိမ့်မယ်။ပြီးရင်တော့ Select ကို ကလစ်ပါ။
ဘောက်လေးတစ်ခု တက်လာလိမ်မယ့်။ ဘောက်လေးမှာ Zawgyi-One ရွေးပြီး OK ဒါဆို မြန်မာစာလေး အဆင်ပြေလေးနဲ့အသုံးပျြုနိုင်ပါပြီး ။ ဖောက်ပြောင်းရတာလေး လွယ်တယ်နော်။ မရှင်းသေးရင် အောက်မှာ
ကျနော် နမူနာလေး ကို ကြည့်ပေးပါ။ အာလုံး အဆင်ပြေစေရန်အတွက်ပါ။ စစ်မှန်သော စေတနာနဲ့ ။